AKHRI: War-mutiyeedka ka soo baxay Shirkii Wadatashiga ee Puntland & 11 Qodob oo laga soo… – HalQaran.com
AKHRI: War-mutiyeedka ka soo baxay Shirkii Wadatashiga ee Puntland & 11 Qodob oo laga soo…
by HalQaran Staff	 March 17, 2020 20 Views
Garowe (Halqaran.com) – Shirka Wadatashiga Puntland oo mudda saddex maalmood ah ka socday magaalada Garowe ayaa laga soo saaray War-murtiyeed ka kooban 11 qodob oo ku wajahan Arrimaha gudaha Puntland iyo sidoo kale guud ahaan xaaladda Siyaasadeed ee Soomaaliya.
Qodob kamid ah War-murtiyeed ka soo baxay Shirka, ayaa lagu sheegay in Puntland ay Shir weyne Wadatashiya ku casuuntay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka, si looga tashado khilaafka labada dhinac iyo arrimaha doorashooyinka soo socda ee 2020/2021.
Sidoo kale, Puntland waxay qaaddacday Sharciga doorashooyinka heer Federaal oo ay ansixiyeen labad Aqal ee Baarlamanka Soomaaliya, uuna saxiixay madaxweyne Farmaajo, Sharcigaas oo Puntland ku tilmaantay mid baalmarsan Dastuurka iyo Shuruucda dalka, islamarkaana dalka ku celinaya Nidaamka 4.5 ee Saami qeybsiga Beelaha.
Dhinaca kale Shirka ayaa lagu go’aamiyay in la qabto Shir weyne heer Puntland ah oo looga arrinsanayo soo celinta deegaannada Sool, Sanaag iyo Cayn ee ka maqan gacanta Puntland.
Laakiin war-murtiyeedka faahfaahin loogama bixin wakhtiga Shirkaasi dhacayo, halka lagu qaban doono iyo cidda lagu casumay midkoodna.
Ugu dambeyn, war-murtiyeedka ayaa dowlad goboleedka Puntland ugu baaqay in la dardar geliyo barnaamijka Dimoquraaddiyeynta Puntland, islamarkaana si dhakhso ah loo dhiso maxkamadda Dastuuriga ah oo go’aanno ka gaari karta, haddii khiaaf Dastuuriya yimaado.
Halkan ka akhriso War-muritiyeedka:
Xafiiska Wararka Halqaran.con
#War-mutiyeedka ka soo baxay Shirkii Wadatashiga ee Puntland
Previous Post Afar ruux oo kale oo maanta lagu karantiilay magaalada Muqdisho
Next Post Mandera governor calls for removal of Janan forces from his county